9 Valan-drongony tsara indrindra any Alemaina
Torolàlana ho an'ny valan-drano tsara indrindra any Alemaina
Misy fomba maro handosirana mandritra ny fahavaratra alemana. Mipetraha manodidina ny rano amin'ny kianjan'i Wasserspielplatz , makà aina ao amin'ny farihy na any amin'ny torapasika tsara indrindra any Alemaina, na dia afaka mandeha amin'ny làlambe hafa aza ianao ary misamboaravoara ao anaty sauna . Fa ny tena mahafinaritra azonao atao amin'ny fahavaratra dia ny mandeha any amin'ny valan-drano.
Toerana fitehirizana rano ( Freizeitbad ) no fampandrosoana vaovao, saingy ireo toerana mahafinaritra ireo no toerana tsara indrindra hahatongavana amin'ireo onja. Indraindray misy fitambarana indostrialy sy dobo fanatanjahan-tena mandritra ny taona mifalifaly, izy ireo dia misongadina ho an'ny ankizy sy toeram-pitsaboana ho an'ny olon-dehibe.
Apetaho eny amin'ny zaridaina tsara indrindra any Alemaina ny lalanao.
Ny zaridainan-drano lehibe indrindra ao Eoropa dia any ivelan'i Berlin. Ao amin'ny trano mammoth dia afaka mahita avy lavitra kilometatra ianao, ireo mpitsidika dia tena mifindra any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tropika rehefa miditra ao anatiny izy ireo. Manana hafanana mafana mandritra ny taona manontolo izy ireo ary mahasarika ny fianakaviana manontolo:
Ny zaridaina dia ny habeny saha feno kianja valo - ampy hahitana ny ala mando lehibe indrindra eran-tany, sambo lambo sandainy, spa-tropikana sy toeram-ponenana sona mihoatra ny 10.000 metatra toradroa, slide water (Rutschen) mitombo maherin'ny 70 km / h, ary na dia bala afovoan-dranomandry aza izay mivezivezy 60 metatra eny amin'ny rivotra.
Fampahalalana ho an'ny mpizaha tany ho an'ny nosy tropika
Adiresy: Tropical-Islands-Allee 1, 15910 Krausnick
Ora : Isaky ny 6:00 - misasakalina; faritra ivelany 10:00 - 22:00; Sauna & spa 9:00 - midnight
Fandraisana: 42 € (49 € anisan'izany spa) Adults; € 33 Kids (ambanin'ny 5 maimaim-poana)
Hotels near the Tropical Island
GALAXY Water Park ao amin'ny Therme Erding
Ny ranomandry rano lehibe indrindra any Eoropa ary ny spa lehibe lehibe indrindra ao amin'ny firenena dia miisa 145,000 m ² amin'ny zaridaina tsara indrindra any Alemaina. Ilaina ny habeny satria i Therme Erding dia mitondra mpitsidika maherin'ny 1.5 tapitrisa isan-taona!
Miaraka amin'ny fitohizan'ny fiaramanidina miisa miisa 2.500 metatra, dia ity hetsika momba ny fitrandrahana rano ity. Ireto ny hevi-dehibe: Magic Eye, 360-metatra fanakatonana mihidy, voalaza fa ny ela indrindra eran'izao tontolo izao. Amin'ny lohataona, ny toeram-pambolena sy fiompiana an-jaridaina ary ny toeram-piompiana dia manokatra toeram-panatanjahan-tena ho an'ny baolina kitra, tabilao amin'ny latabatra ary lakolosy. Misy diany roa koa misokatra amin'ny vanim-potoana.
Ao amin'ny VitalOase, ireo mpitsidika dia afaka misambotra miaraka amin'ny hazo palmie. Tsidiho ireo faritra tahaka ny Royal Spa izay natsangana taorian'ny palazzi Venetiana. Ary raha oharina amin'ny sasany amin'ireo tranonkala hafa amin'ity lisitra ity, ny sauna dia sariaka amin'ny ankizy, eny fa na dia manolotra ny fianakaviana lehibe indrindra eran-tany aza.
Fampahalalana ho an'ny vahiny ho Therme Erding
Adiresy: Thermenallee 1-5, 85435 Erding
Hours : Mon-Fri 14:00 - 21:00; faran'ny herinandro & fitsaharana 9: 00-20: 00
Fandraisana: 26 € (49 € anisan'izany spa) Adults; € 33 Kids (ambanin'ny 5 maimaim-poana)
Ny zaridainan-drano mahafinaritra dia manana fitaratra rano 18 sy dobo maromaro mitambatra mba hanamboarana ny fialam-boly rehetra. Misy ny asam-pananana ho an'ny haavon'ny planeta rehetra, ka anisan'izany ny lahatsoratr'i Germany indrindra amin'ny lahatsoratr'i Alemaina nandritry ny 4 taona. Tandremo ihany koa ny bilaogin'izy ireo satria izy ireo dia mampiseho fisehoan-javatra tsy tapaka, toy ny Magical Fairy Tales.
Nanana fahafinaretana tamin'ny masoandro ve ianao? Mialà ao amin'ny faritra misy ny Oasis Palm sy Wellness miaraka amin'ny sauna maro.
Fampahalalana ho an'ny vahiny momba ny Badeparadies Schwarzwald
Adiresy: Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt
Ora : Isaky ny 9:00 - 22:00
Fidirana: € 20 (€ 27 anisan'izany spa) Adults
Tsy voafetra amin'ny rano manintona rano, Parkapark dia feno parkana am-pihetseham-po. Misy ireo lohahevitra an-tsoratra , rindrina sy fampisehoana an-tsehatra.
Amin'ny fahavaratra dia mandeha eny an-dalambe ny fiara fitateram-bahoaka. Atlantica SuperSplash, Poseidon Water Coaster ary ny Tirol Log Flume Ride dia mampientanentana be.
Raha mandeha amin'ny ririnina ianao, mariho fa ny ankamaroan'ny dia an-dranomasina dia mihidy noho ny ambany hafanana mafana. Nefa mbola afaka manarato ny fisotroan-drivotra any amin'ny hotely isan-taona.
Fampahalalana ho an'ny mpizaha tany ho an'ny Park Europa
Adiresy: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rost
Ora : fizaran-taona (Martsa - Nov) 9:00 - fara fahakeliny 18:00; Ny fahavaratra (Nov - Jan) 11:00 - fara fahakeliny 19:00
Fandraisana: € 44.50 fahavaratra (ankizy € 38.50); € 38.50 ririnina (ankizy € 32.50). Ny ankizy latsaky ny 4 dia afaka
Any akaikin'i Stuttgart , ity tanàna mandro fandriana ity dia ahitana dobo filomanosana, renirano mamy, lapoaly sy dobo misamboaravoara ary mampihetsi-po ireo lalaon'ny lalaon-kira. Ny Black Hole dia mameno ny gidro ao anaty haizina raha ny mpilomano dia mitsambikina mankany amin'ny hetsika.
Aorian'ny fientanam-po, mipetraha ary miala sasatra amin'ny sauna. Misy toaka sy fisaintsainana miaraka amin'ny zava-drehetra avy amin'ny toeram-ponenana ao anaty sauna. Ny Fikambanana Sauna Sauna dia nanome ny kintana dimy ho an'ny tanàna. Fancy!
Fampahalalana ho an'ny vahiny momba ny Fildorado Filderstadt
Adiresy: Mahlestraße 50, 70794 Filderstadt
Ora : Diary 9: 00-20: 30
Fandraisana: 15,50 €; 16,70 € sauna iray mandritra ny 3 ora
Aqualand no nanamarika ny Aquaconda 150 metatra lava lava, fa tsy ny mega-slide ihany. Andramo ny Aqua Canyon, Red Star ary Bommerang miaraka amin'ny dingana maro samihafa maimaim-poana, fandroana.
Ireo mpitsidika koa dia tokony hijery ny toeram-ponenan'ny valan-javaboary izay mampiseho ny zavamisin'ny rivotra sy ireo saona saosy 10 miaraka amin'ny hammam.
Fampahalalana momba ny tanàna ho an'ny Aqualand Cologne
Adiresy: Merianstraße 1, 50765 Köln
Ora : Alatsinainy hatramin'ny Alakamisy 9:30 - 23:00; faran'ny herinandro 9:00 - misasakalina
Fandraisana: € 16.90; € 21.90 sauna
Io toeram-pitsaboana io sy ny toeram-ponenana any amin'ny sisin-tanin'i Baltika dia mitana ny sambon-dranomasina rehetra ary manangona azy ireo ho an'ny mpitsidika rehetra amin'ny taona rehetra. Ny zaridaina dia manana milina 18.000 metatra toradro ambanin'ny dobo filomanosana ranomandry, tontolon'ny tropica ary maherin'ny 300 metatra. Ho an'ireo zazakely, misy dobo mitokana iray miaraka amin'ny mari-pana ao anaty rano 34 degre Celsius. Ny dobo dia eo akaikin'ny Bay of Lübeck mba hahafahan'ny mpitsidika miditra ao amoron-dranomasina.
Ny olon-dehibe ihany-dia misy karazana saona avy amin'ny eucalyptus ho bio . Misy ihany koa ny oasisan'ny fialan-tsasatra, fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena, solariara ary fitsaboana. Mba hitsidihana ny zavatra ilainao hafa dia tsidiho ny trano fisakafoanana, ny bar ary ny fivarotana. Ny Gran Belveder Spa & Golf Resort koa dia manana fidirana mivantana any amin'ny spa.
Fampahalalana ho an'ny vahiny momba ny Ostsee-Therme Scharbeutz
Adiresy: Strandallee 143, 23683 Scharbeutz
Ora : Welondra: 9:00 - 22:00; Saunas landscape: 9:00 - 23:00
Fandraisana: € 18 Adults; € 10 Kids
Hotels in der Nähe von Ostsee-Therme Scharbeutz
Ity valan-javamia marevaka ity dia manasongadina diaporama roa tahaka ny The Green Kick (rindrina fantsom-panafika miaraka amin'ny hazakazaka catapult) ho an'ny mpizahatany Sauerland Surfer amin'ny mpizahatany Crazy Surfer ho an'ny matianina.
Ny fanangonana dia mifanaraka amin'ny loha-drano mitana sambo pirata sy ny dobo filalaon'ny ankizy. Ao amin'ny sehatry ny sauna, ankafizo ny Sauna hazo organika miaraka amin'ny fiposahan'ny Amazonian.
Fampahalalana ho an'ny vahiny momba ny AquaMagis
Adiresy: Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg
Ora : Mon - Fi 9:00 - 22:00; 9:00 - 11:00 sy 18:00 - 22:00
Adidiny: € 14.95 Adults; € 12.95 Kids
Mahavariana iray 101 metatra ny halaviran-dalao tsara tarehy toy ny andriam-borona, manintona ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny fivoahana eo amin'ny fiakarana dia maneho ny fivoahan'ilay valan-javaboary alohan'ny hikarakaranao ny onja. Mipetraha ny hozatry ny hozatra ao amin'ny faritra tropikaly miaraka amin'ny sauna sy dite.
V isitor Information for Ocean Wave
Adiresy: Dörper Weg 22, 26506 Norden-Norddeich
Ora : 10:00 - 22:00
Fandraisana: 10,50 € Adults; 8,50 € Kids (hatramin'ny 1 metatra monja no 1 euro)
Festival Spring Spring
Alemaina amin'ny lohataona
Ny tranombakoka tsara indrindra any Alemaina
Ny zavatra tsara indrindra atao any Dusseldorf
Neuschwanstein - Fairytale Castle any Germany
Ny valan-javaboary 15 mahavariana any avaratra andrefana
Inona no Atao Kafe Holandey?
Zip Codes ho an'i Charlotte Neighborhoods
8 Toerana tsara indrindra hahazoana sakafo Delhi Street Food
Fikolokoloana an-dalana mankany Santa Cruz, Californie
Where To Stay In Las Vegas: Find The Right Hotel in Las Vegas
Torolalana ho an'i Reims any Champagne
France sy Paris tamin'ny Jolay - Weather, What to Pack, What to See
Ireo manam-pahefana voafidy any Brooklyn, NY
Ny 9 tena nahafinaritra indrindra tao Austin
Hitady Oktoberfests any New Mexico
Ischia Thermal Parks sy spa fitsaboana
Vancouver Events tamin'ny Febroary